Shiinaha Mashiinka Buuxinta iyo Xiritaanka (ee loogu talagalay Weelka), Soosaarka Taxanaha KHG-60 iyo Warshad | Iswaafajiyay
Mashiinka Buuxinta iyo Mashiinka Xidhitaanka (ee loogu talagalay Weelka), Taxanaha KHG-60
Mashiinka buuxinta iyo xirida mashiinka waxaa loogu talagalay buuxinta iyo xirida fijaanada galaaska, balaastigga ama birta, waxay ku haboon tahay dareeraha, semisolid, iyo badeecooyinka budada ee meelaha nadiifka ah ama qolalka nadiifka ah.
Si buuxda oo otomaatig ah u dhammaystiridda nidaamyada buuxinta, joojinta iyo xiritaanka iyadoo loo marayo nidaamyada farsamada, pneumatic iyo korontada;
Waxqabadka amniga ee "Dhalo Maya - Wax Buuxi Ma Jirto" iyo "Ma Joojiyaa - Ma Joogto", khaladaadka hawlgalka waa la yareeyaa;
Que Xuddunta fur-furka waa la xulan karaa;
Filling Buuxin faaruq ah, saxnaan buuxin sare leh;
■ Si fudud loo hawlgalo, waxqabad xasiloon iyo nabadgelyo la isku halleyn karo;
Buuxinta awooda 10-100ml
Soo saar 0-60 weel / daqiiqo
Buuxinta saxnaanta 15 0.15-0.5
Mashiinkani waa mashiinka wax buuxiya, istaagaya iyo wax xiraya. Mashiinkaani wuxuu qaataa xarun muujinaysa kamarad xiran oo leh saxnaan sare, hawl lagu kalsoonaan karo iyo nolol adeeg dheer. Tilmaamuhu wuxuu leeyahay qaab-dhismeed fudud oo uma baahna dayactir loogu isticmaalo muddo-dheer.
Mashiinkaani wuxuu ku haboon yahay buuxinta, ku xirida iyo xoqida (rogista) cabitaano kala duwan oo yar yar, sida saliidaha lagama maarmaanka ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada, daawooyinka, warshadaha kiimikada iyo goobaha cilmi baarista. Mashiinkaan looma soo saari karo oo kaliya hal mashiin, laakiin sidoo kale waxaa lagu dari karaa dhalo dhaqe, qallajiye iyo qalab kale si loo sameeyo khad soosaar oo isku xiran. La kulan shuruudaha GMP.
Mashiinka Mashiinka Buuxinta Dhalada Xilin
1. Dejinta is-dhexgalka man-mashiinka, hawlgal macquul ah oo ku habboon, xakamaynta PLC.
2. Xakamaynta is-beddelka soo noqnoqda, hagaajinta sabab la'aanta xawaaraha wax soo saarka, tirinta otomaatiga ah.
3. Shaqada joojinta otomaatiga ah, wax buuxin la'aan dhalo la'aan.
4. Buuxinta booska Disc, xasilloon oo lagu kalsoonaan karo.
5. Xakamaynta saxeexa kaamerada sare.
6. Waxaa laga sameeyay SUS304 iyo 316L bir bir ah, oo buuxisa shuruudaha GMP.
Buuxinta iyo daboolida u diyaargarowga dareeraha ah ee warshadaha dawooyinka, waxay inta badan ka kooban tahay dunmiiqa, auger quudinta dhalada, farsamo cirbadeed, farsamo buuxin ah, waalka wareega, auger oo dhalada siideynaya, iyo xarun wax lagu xiro.
Hawlaha Xakamaynta Main
1. Ku soo qaad dhalooyinka daawada si toos ah xawaare sare, xawaaraha naqshaduna wuxuu gaari karaa 600 dhalo / min.
2. Cirbadda buuxintu waxay qaadataa habka raadinta ee isweydaarsiga si loo buuxiyo loona beddelo joojiyaha oo loo cadaadiyo joojiyaha iyadoo la raacayo xaaladda dhaqdhaqaaqa dhalada daawada.
3. Waxaa loo adeegsan karaa qeexitaano kala duwan, oo si toos ah ayuu u hagaajin karaa mugga buuxinta, dhererka cirbadda buuxinta iyo xawaaraha wax soo saarka ee nidaamka oo dhan iyadoo loo eegayo qeexitaanka dhalooyinka kala duwan.
4. Isla mar ahaantaana la ogaado shaqooyinka aan lahayn dhalo aan wax buuxin iyo dhalo aan lahayn joogsade.
5. Xogta wax soo saarka iyo xogta wax soo saarka waa la hayn karaa waqti dheer, waxaana la beddeli karaa xogta qaaciidada wax soo saarka.
Hore: Mashiinka Aseptic Buuxinta iyo Mashiinka Xidhitaanka (loogu talagalay Indhaha-hoos u dhaca), Taxanaha YHG-100
Xiga: Mashiinka Buuxinta iyo Mashiinka Mashiinka, Taxanaha YAMP